သတင်း - မျိုးပွားစက်က အကောင်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်ပေါက်လဲ သိချင်ပါသလား။
incubator က အကောင်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်ပေါက်လဲသိချင်ပါသလား။
1. ၏တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ ပေါက်ဖွားသည်။. သင့်မီးဖွားခန်းကို အပူချိန်အဆက်မပြတ်ရှိနေစေရန်၊ အပူချိန်အတက်အကျများကို တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်သောနေရာတွင် ထားပါ။ နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော ပြတင်းပေါက်များအနီးတွင် မထားပါနှင့်။ နေရောင်ခြည်သည် သားအိမ်ပေါက်ကို အပူပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သန္ဓေသားလောင်းကို သေစေနိုင်သည်။
ပလပ်သည် မတော်တဆပြုတ်ကျခြင်းမဖြစ်စေရန် ပါဝါအရင်းအမြစ်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
ကလေးများ၊ ကြောင်များနှင့် ခွေးများကို မီးဖိုနှင့်ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် အပူချိန်အနည်းငယ်သာသာရှိပြီး နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိသောနေရာတွင် ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ခြေမနင်းမိသည့်နေရာတွင် သားဖောက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2. incubator လည်ပတ်မှုကျွမ်းကျင်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။ပေါက်ဖွားသည်။ ဥမပေါက်ခင် ဂရုတစိုက်နဲ့။ ပန်ကာ၊ အလင်းရောင်နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်သော့များကို သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သေချာပါစေ။
ပေါက်ဖွားမှုကို စစ်ဆေးရန် သာမိုမီတာကို အသုံးပြုပါ။ အပူချိန် အလယ်အလတ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် မပေါက်ဖွားမီ ၂၄ နာရီအတွင်း မကြာခဏ စစ်ဆေးသင့်သည်။
3. ဘောင်များကို ချိန်ညှိပါ။ အောင်မြင်စွာ သားဖောက်နိုင်ရန်၊ incubator ၏ ဘောင်များကို စစ်ဆေးရပါမည်။ သားပေါက်ရန်ပြင်ဆင်ချိန်မှ ဥများလက်ခံရရှိချိန်အထိ၊ သင်သည် မျိုးဥပေါက်အတွင်းရှိ ဘောင်များကို အကောင်းဆုံးအဆင့်အထိ ချိန်ညှိသင့်သည်။
အပူချိန်- ကြက်ဥပေါက်သည့် အပူချိန်သည် ၃၇.၂-၃၈.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၃၇.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်)။ အပူချိန် 36.1 ℃ သို့မဟုတ် 39.4 ℃ နှင့်အထက် ရှောင်ပါ။ အပူချိန်သည် အပေါ်နှင့်အောက် ကန့်သတ်ချက်များကို ရက်အတော်ကြာ ကျော်လွန်ပါက၊ ပေါက်နှုန်းကို ပြင်းထန်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
စိုထိုင်းဆ- incubator ရှိ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆကို 50% မှ 65% တွင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည် (60% သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်)။ ကြက်ဥဗန်းအောက်ရှိ ရေအိုးဖြင့် အစိုဓာတ်ကို ပေးပါသည်။ သင်တစ်ဦးကိုသုံးနိုင်သည်။
စိုထိုင်းဆကိုတိုင်းတာရန် spherical hygrometer သို့မဟုတ် hygrometer ။
4. ကြက်ဥကိုထည့်ပါ။ အတွင်းပိုင်းအခြေအနေအရဆိုလျှင် လည်းကောင်းပေါက်ဖွားသည်။ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် အနည်းဆုံး 24 နာရီကြာ စောင့်ကြည့်ထား၍ ဥများကို ထားနိုင်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး ကြက်ဥ ၆ လုံးထည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဥနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးလုံးသာ အကောင်ပေါက်ရန် ကြိုးစားပါက၊ ရလဒ်သည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပြီး မည်သည့်အရာမှ မရနိုင်ပါ။
ကြက်ဥများကို အခန်းအပူချိန်တွင် အပူပေးပါ။ ဥများကို အပူပေးခြင်းသည် ဥများကိုထည့်ပြီးနောက် အပူချိန်အတက်အကျကို လျှော့ချပေးသည်။
ဥများကို incubator တွင် ဂရုတစိုက်ထည့်ပါ။ ကြက်ဥများကို ဘေးနှစ်ဖက်တွင် လှဲနေစေပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးစီ၏ ပိုကြီးသောအဆုံးသည် ထိပ်ဖျားထက် အနည်းငယ်မြင့်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစေ့သည် မြင့်မားပါက၊ သန္ဓေသားလောင်းသည် မှားယွင်းနေနိုင်ပြီး ပေါက်ချိန်ပြည့်သောအခါ အခွံကို ကွဲရန်ခက်ခဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
5. ကြက်ဥထည့်ပြီးနောက် အပူချိန်ကို လျှော့ချပါ။ ဥများ ဥပေါက်ပြီးပါက အပူချိန် ခေတ္တ လျော့ကျသွားပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် incubator ကို ချိန်ညှိခြင်းမပြုပါက၊ သင်သည် ဘောင်များကို ပြင်ဆင်သင့်သည်။
သန္ဓေသားလောင်းကို ပျက်စီးစေသည် သို့မဟုတ် သေစေသောကြောင့် အပူချိန်အတက်အကျများအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် ပူနွေးမှုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
6. ကြက်ဥပေါက်မည့်ရက်ကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် ရက်စွဲကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အကောင်းဆုံးအပူချိန်မှာ ကြက်ဥပေါက်ဖို့ ၂၁ ရက်ကြာပါတယ်။ အပူချိန်နိမ့်သော ဥများ နှင့် ဥအဟောင်းများ သည် အကောင်ပေါက်ခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသည် ။ အကယ်၍ သင့်ဥသည် ၂၁ ရက်အကြာတွင် မပေါက်သေးပါက၊ အချိန်ပိုပေးပါ။
၇။ ကြက်ဥကို နေ့တိုင်း လှန်ပေးပါ။ ကြက်ဥကို တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး သုံးကြိမ် ပုံမှန်လှည့်ပေးသင့်ပြီး ငါးကြိမ်က ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက ကြက်ဥရဲ့တစ်ဖက်မှာ X ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆွဲရတာကြိုက်ပြီး ဘယ်ဥကိုလှန်ပြီးပြီလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဘယ်အရာတွေကို လွှဲသွားတယ်ဆိုတာ မေ့ဖို့ လွယ်ပါတယ်။
ကြက်ဥကို လက်ဖြင့်လှည့်သည့်အခါ ကြက်ဥတွင် ဘက်တီးရီးယားနှင့် အဆီများမကပ်စေရန် လက်ကို ဆေးကြောရပါမည်။
18 ရက်မြောက်နေ့အထိ ဥများကို လှည့်၍ အကောင်ပေါက်ရန် မှန်ကန်သောထောင့်ကို ရှာနိုင်စေရန် ရပ်ပါ။
8၊ incubator အတွင်းရှိစိုထိုင်းဆကိုချိန်ညှိပါ။ ပေါက်ဖွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် စိုထိုင်းဆ 50% မှ 60% တွင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ ပြီးခဲ့သော3ရက်အတွင်း 65% တိုးသင့်သည်။ စိုထိုင်းဆအဆင့်သည် ကြက်ဥအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သားပေါက်နှင့်ပတ်သက်သော စာပေများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ရေအိုးထဲရှိရေကို ပုံမှန်ဖြည့်ပါ၊ မဟုတ်ရင် စိုထိုင်းဆ အရမ်းနည်းသွားမယ်။ ရေနွေးကို သေချာထည့်ပါ။
စိုထိုင်းဆတိုးချင်ရင်တော့ ရေဗန်းထဲကို ရေမြှုပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။
မီးသီးအတွင်းရှိ စိုထိုင်းဆကို တိုင်းတာရန် မီးသီး hygrometer ကို အသုံးပြုပါ။ ပေါက်ဖွားသည်။. စာဖတ်ခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး incubator ၏ အပူချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် စိုထိုင်းဆပြောင်းလဲခြင်းဇယားကို ရှာပြီး စိုထိုင်းဆနှင့် အပူချိန်ကြား ဆက်နွယ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆကို တွက်ချက်ပါ။
9၊ လေဝင်လေထွက်သေချာပါစေ။ လေ၀င်လေထွက်စစ်ဆေးရန်အတွက် နှစ်ဖက်လုံးနှင့် မီးဖို၏ထိပ်တွင် အပေါက်များရှိသည်။ အနည်းဆုံး ဤအပေါက်များထဲမှ အချို့ကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ အကောင်ပေါက်စပြုလာသောအခါ လေဝင်လေထွက်ပမာဏကို တိုးပေးပါ။
10. 7-10 ရက်ကြာပြီးနောက် ဥများကို မီးခြစ်ထားပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ဖယောင်းတိုင်ဖျက်ခြင်းသည် သားဥအတွင်း သန္ဓေသားလောင်းနေရာမည်မျှ နေရာယူထားသည်ကို သိရန် အလင်းရင်းမြစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ 7-10 ရက်အကြာတွင်၊ သန္ဓေသား၏ကြီးထွားမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဖယောင်းတိုင်ဆွဲခြင်းသည် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော ဥများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သည်။
မီးသီးတစ်လုံးကို ကိုင်ထားနိုင်သော သံဘူးတစ်ဘူးကို ရှာပါ။
ဥတစ်လုံးကိုယူ၍ အပေါက်မှတဆင့် ထွန်းလင်းနေသော အလင်းရောင်ကို ကြည့်ပါ။ မမျိုးဥသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရပါက သန္ဓေသားလောင်း မဖွံ့ဖြိုးသေးဘဲ မျိုးဥမျိုးမပွားနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ သန္ဓေသားလောင်း ကြီးထွားလာပါက မှိန်ဖျော့နေသည့် အရာဝတ္ထုကို မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သန္ဓေသားပေါက်မည့်ရက်သို့ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသောအခါ သန္ဓေသားသည် ပိုကြီးလာမည်ဖြစ်သည်။
သားအိမ်ထဲတွင် သန္ဓေမအောင်သေးသော ဥများကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
11. ပေါက်ဖွားမှုအတွက် ပြင်ဆင်ပါ။ ဥများ လှည့်ပတ်လှည့်ခြင်းကို မျှော်မှန်းထားသည့် ရက်မတိုင်မီ ၃ ရက်အလိုတွင် ရပ်ပါ။ ဥအများစုသည် ၂၄ နာရီအတွင်း အကောင်ပေါက်သည်။
မပေါက်ခင် ကြက်ဥဗန်းအောက်မှာ ပိတ်စကိုထည့်ပါ။ ပိတ်စသည် ပေါက်ဖွားစဉ်အတွင်း ဥခွံများနှင့် ပစ္စည်းများ စုဆောင်းနိုင်သည်။
incubator အတွင်းရှိ စိုထိုင်းဆ တိုးလာစေရန် ရေနှင့် ရေမြှုပ်ကို များများထည့်ပါ။
ပိတ်ပါ။ ပေါက်ဖွားသည်။ ပေါက်ဖွားခြင်း၏အဆုံးတိုင်အောင်။